Ninja ကျိုတို။ အဘယ်မှာရှိဂျပန်တွင် Ninja အစွန်းအကွက်ကိုရှာပါရန် - Samurai Ninja Museum
Ninja ကျိုတို။ အဘယ်မှာရှိဂျပန်တွင် Ninja အစွန်းအကွက်ကိုရှာပါရန်
ကျိုတိုမှာ, တစ်ဦးနင်ဂျာရှိုးကိုကြည့်တဲ့ Ninja ကိုဒိုဂျိုသွားရောက်ကြည့်ရှု, တစ်ဦးနင်ဂျာရွာကိုသွားတစ်ခုသို့မဟုတ် Ninja ကိုခရီးစဉ်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျိုတို japan ၏မြို့တော်ကြီးနှင့်ကျိုတိုအများအပြား Ninja ကိုအစက်အပြောက်များနှင့် Ninja ကိုမြို့ရွာရှိပါတယ်။
IGA အဆွေအမျိုးနှင့် Kogas နွယ်စု: သမိုင်းကြောင်းအဂျပန်တွင်နှစ်ခုသာ Ninja ကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်ရှိကြ၏။ IGA နှင့် Koka နှစ်ဦးစလုံးဟာမြို့လယ်ကနေဝေးဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးနင်ဂျာရဲတိုက်နှင့် IGA (ကျိုတိုကနေ2နာရီ) တွင် Ninja ကိုရွာရှိပါသည်။ IGA နှင့် Kogas ဝေးမြို့လယ်မှ စ. လူအတော်များများ Ninja ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ကျိုတိုအတွက်ဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ပြတိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှု။
Nijo Castle ။ Ninja ကိုဒီရဲတိုက်တွင်နေထိုင်လေ့ရှိတယ်။ သို့သော်အခြား Ninja ကိုသူလျှိုအားဖြင့်စိမျ့တစ်ဦးစွန့်စားမှုရှိခဲ့သည်။ အထူးကြမ်းပြင်တိုကုဂါဝါ Shogun အားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ လူများတို့သည်ကြမ်းပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်သည့်အခါတစ်ဦး squeaking ဆူညံသံလည်းမရှိ။ ဒါကရန်သူရဲ့သူလျှိုနင်ဂျာ detect လုပ်ဖို့ပြုလေ၏။
Nijo Jinya ။ အတော်များများက Ninja ကိုလည်း Nijo ရဲတိုက်အနီးရှိနေထိုင်ခဲ့တယ်။ နာမည်ကျော် Ninja ကိုအဆောက်အဦးတစ်ခုမှာ Nijo-jinya ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအိမ်တော်ကိုလည်းလူတွေကဆန်ကုန်သွယ်ရှိရာတစ်ဦးတည်းခိုခန်းနှင့်အလယ်ဗဟိုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အိမ်သူအိမ်သား Ninja ကိုများအတွက်အဆင်ပြေကြောင်းတစ်ဗိသုကာရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံဂျပန်ခရီးစဉ်ရှိပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လိုနေ့စဉ်ခရီးစဉ်များအတွက် samura နှင့် Ninja ကိုပြတိုက်ကျိုတိုသို့မဟုတ်အိုဆာကာအတွက်ဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ကိုပြတိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Nanzenji ဘုရားကျောင်း။ 16 ရာစုအတွင်းမှာတော့အမညျ Ishikawa Goemon ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော် Ninja ကိုရှိခဲ့သည်။ မိမိအဒဿနရုံရော်ဘင် hood ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏: ငွေရတတ်သောသူကလူထံမှခိုးယူသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်လူများအရာခပ်သိမ်းပေးပါ။ သို့သော်သူကရှိုးဂန်း Toyotomi ဖမ်းမိခဲ့သည်။ သူကဧရာအိုး၌အသက်ရှင်လျက်ပြုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက် 1594 အတွက် Nanzenji ဘုရားကျောင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ရာအရပျကိုယူ။
တောင်ပေါ်က Hiei အတွက် Enryakuji ဘုရားကျောင်း။ Ninja ကိုအစဉ်အလာမွေးဖွားခဲ့သည်ရှိရာတောင်ပေါ်သို့ Heiei ဖြစ်ပါတယ်။ 1571 ခုနှစ်, ODA Nobunaga ဗိမာနျတျောကိုမီးရှို့ခြင်းနှင့်သံဃာတော်များရာချီသည့်ဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်ကာလအတွင်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Enryakuji incidednt ပြီးနောက် IGA အတွက် Ninja ကိုနှင့် ODA Nobunaga အကြားကြီးမားတဲ့ရန်ပွဲရှိ၏။
ဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ပြတိုက်ဂျပန်ကျိုတို။
ဒါဟာသင် Ninja ကိုအကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှဘယ်မှာကျိုတိုမှာရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသော Ninja ကိုနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့် Ninja ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းလူတန်းစားရှိသည်။ Ninja ၏သမိုင်းကိုပြန်ကျော်ကို 1000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမွေးဖွားခဲ့သည်သော Shugendo အစဉ်အလာမှတတ်၏။ အဆိုပါပြတိုက် Tokagureryu နှင့် Ninja ကို၏ teaining နည်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းချက်များရှိပါတယ်။ သင်ကပြတိုက်တစ်ခုအတွင်း၌ဤသူအပေါင်းတို့ကိုပြုနိုင်သည်) Ninja ကြယ်ပွင့်ပစ်ခ) Ninja ကိုမြို့ရိုးအက c တက်ပြီး) Ninja ကိုမတ်မတ်ဃ) Ninja ကိုသင်ခန်းစာင) Ninja ကိုသင်ခန်းစာ, f) Ninja ကိုကျေးရွာနှင့် Ninja ကိုအိမ်သူအိမ်သား။ အဆိုပါပြတိုက်လည်း Ninja ကို tabi ခြေအိတ်နှင့် Ninja ကိုကြယ်ပွရောင်းချတဲ့ Ninja ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Ninja အကြောင်းကိုသိသောအရာတို့ကို
IGA အဆွေအမျိုးနှင့် Koka နွယ်စု: ဂျပန်တွင်သာ2Ninja ကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်ရှိခဲ့သည်။
Ninja ကိုလယ်သမားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဆာမူရိုင်းများကဲ့သို့အခွင့်ထူးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
Ninja ကိုအနက်ရောင်မတ်မတ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့မတ်မတ်အပြာမှောင်မိုက်သို့မဟုတ်ပဲရိုးရှင်းတဲ့အရောင်များဖြစ်ခဲ့သည်။
Ninja ကို 60 ကျော်ကီလိုဖြစ်လို့ယူဆတယ်မခံခဲ့ရပါ။
Ninja ကိုပြေးမှာအလွန်ကောင်းသောခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအချို့နင်ဂျာတနေ့ 200 ကီလိုမီတာကို run နိုင်ကြောင်းအစီရင်ခံသည်။
Ninja ကိုသူလျှိုတစ်ဦးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကသူရဲမရှိကြပေ။
Categoriesဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja (Burmese) TagsNinja ကို dojo, Ninja ကိုကျိုတို, Ninja ကိုဖိနပ်, Ninja ကိုမတ်မတ်, Ninja ကိုလေ့ကျင့်ရေး, Ninja ကိုသင်ခန်းစာ, Ninja ကိုအတှေ့အကွုံကျိုတို, tabi ခြေအိတ်, ကျိုတိုမှာရှိတဲ့ Ninja ကို
Previous PostPrevious Ninja Kyoto. Dimana Menemukan Tempat Ninja di Jepang
Next PostNext निनजा क्योटो। जापानमा नि: शुल्क स्पटहरू कहाँ खोज्नुहोस्